IUCN Congress Conservation Congress: Tallaabo Cusub oo Joogto ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » IUCN Congress Conservation Congress: Tallaabo Cusub oo Joogto ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • News • Waajib ah • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda
Raiisel wasaaraha Faransiiska Macron oo ka hadlaya furitaanka IUCN Congress
Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda (IUCN) wuxuu soo gabagabeeyay shirweynihii Quadrennial World Conservative toddobaadkan-sanad ka dib sidii markii hore loogu tala galay dhibaatada COVID-19.
Waxay ahayd ajande dhammaystiran oo wax-soo-saar leh oo loogu talagalay 9-maalmood ee Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda oo lagu qabtay Marseille, France.
Waxaa jiray 4 shir oo qabsoomay muddadan, ujeedaduna ahayd dhiirrigelinta iyo dhiirrigelinta.
4 -ta shir -weyne ee la soo bandhigay ayaa kala ahaa: Shir -weynaha Dadka Asaliga ah, Shir -weynaha Dhallinyarada Adduunka, Shir -weynaha Guud, iyo Shir -hawleedka Maxaliga ah.
Muddadii uu socday shirweynihii 9-ka maalmood ahaa, xubnaha IUCN waxay u codeeyeen 39 Mooshin, oo la doortay hoggaan cusub, oo ansixiyay barnaamijka IUCN ee xiga ee 2021-2024, kaas oo la odhan doono Dabeecadda 2030: Ururka Waxqabadka. Inta lagu jiro wakhtigaas, sidoo kale, 4 shir -weyne oo gooni -gooni ah ayaa dhacay - the Shir Madaxeedka Dadka Asaliga ah, ka Shirka Dhalinyarada Caalamka, ka Shir Madaxeedka, iyo Shir -hawleedka Maxalliga ah, dhammaantood ujeeddadooda tahay inay dhiirrigeliso oo dhiirrigeliso kooxaha kala duwan ee IUCN la shaqayso.
EcoGo ayaa u timid shirka oo taageeraya 3 mooshin - Mooshinka 003 - Dhisidda Guddiga Isbeddelka Cimilada (ama Sameynta Madal Waxqabadyada Dhibaatada Cimilada ee IUCN ee Caalamiga ah) oo ka socota Hawai'i Conservation Alliance Foundation iyo Codadkeenna Qubanaya; Dhaqdhaqaaqa 101-Dejinta bartilmaameedyada ilaalinta deegaanka ku salaysan ee ku salaysan caddaynta waxa dabeecadda iyo dadku u baahan yihiin si ay u barwaaqoobaan, oo ay kafaala qaaday The WILD Foundation iyo Yellowstone to Yukon Conservation Initiative; iyo Dhaqdhaqaaqa 130 - Xoojinta doorka dalxiiska waara ee ilaalinta kala -duwanaanshaha noolaha iyo adkeysiga bulshada, oo ay soo jeedisay WCPA (guddi ka tirsan IUCN) Kooxda Takhasuska Dalxiiska iyo Meelaha La Ilaaliyay. Labaduba way dhaafeen, sida ka muuqata natiijada codbixinta.
Pamela oo ku taal Aix en Provence
Mooshinka 130 wuxuu daboolayaa abuurista Dalxiis waara oo ah mowduuc iyo isku-darka dhacdooyinka dalxiiska ku saleysan dabeecadda iyo shirarka mustaqbalka iyo shirarka IUCN, wuxuu ku baaqayaa in la abuuro koox ka shaqeysa guddiyada oo diiradda saaraya doorka dalxiiska waara ee ilaalinta kala-duwanaanshaha noolaha iyo adkeysiga bulshada, wuxuuna ku boorinayaa guddiyada kale si loogu daro dalxiiska waara dadaalkooda mustaqbalka. WCPA iyo dhammaan la-hawlgalayaasha ayaa loogu hambalyeeyay arrintan.
Mooshinka 101 wuxuu ahaa waqti dheer sameynta, wuuna dhaaftay mahadnaqa dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee Vance Martin iyo kooxdiisa. Sida isbeddelka cimiladu wuxuu horseedaa baahida loo qabo wax -qabad, kuwani waa noocyada tilmaamaha loo baahan yahay si loo ilaaliyo dabeecadda - furaha badbaadada.
Jehoshua Shapiro, Jessica Hughes, iyo Pamela Lanier casho CEC
Mooshinka 003 aad baa looga dooday. Soo -jeediyayaashu waxay rabeen in la abuuro Guddiga Isbeddelka Cimilada, laakiin dib -u -eegis ay ku samaysay guddiga dib -u -eegista IUCN, luqadda ayaa loo beddelay inay yeelato guddi hawleed, halkii ay ka ahaan lahayd guddi la abuuray. Akhriso jawaabta “Codadkeenna Qallalan” ee isbeddelkaas halkan. Taasi luqadda ayaa isbeddelay iyada oo dib -u -eegis dheeraad ah lagu samaynayo “Samaynta Aaladda Wax -qabadka Dhibaatada Cimilada Caalamiga ah ee IUCN” ama abuurista Guddi. Mooshinka ayaa lagu meel -mariyay dooddii 8 -aad ee ugu dambaysay iyo codeynta shirka, inkastoo aan la ogeyn nooca uu noqon doono.
IUCN waxay kaloo ku heshiisay a bayaan cusub muddada afarta sano ee soo socota iyada oo diiradda la saarayo soo kabashada COVID-19 iyo joojinta khasaaraha noolaha.